Warmly Welcome: စိတ်ဖိစီးမှုကို ဘယ်လို စီမံကွပ်ကဲမလဲ ...?
စိတ်ဖိစီးမှုကို ဘယ်လို စီမံကွပ်ကဲမလဲ ...?
" စိတ်ဖိစီးလိုက်တာ " ၊ " Stress " ဟူသော စကားလုံး တို့မှာ အလုပ်ခွင် နှင့် နေ့စဉ်ဘ၀ တွင် ကြားဖူး နေကျ စကားလုံးများ ဖြစ်နေခြင်း မှာ ယနေ့အခါ တွင် မဆန်းကြယ် တော့ပါ။ Stress သို့မဟုတ် စိတ်ဖိစီးမှု ကို သင်နှင့်အတူ ဆုပ်ကိုမလား ၊ လွှတ်ဖယ် မလား ဆိုသည်မှာ သင်၏ အနာဂတ် နှင့်သာ သက်ဆိုင် ပေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှု ကို စွန့်ပယ်ချင်သူ ၊ ဆုပ်ကိုင် ထားချင်သူများ အတွက် Stress ကို စီမံ ကွပ်ကဲ နည်းလေးများကို မျှဝေ ပေးလိုက် ပါတယ် ...
(၁) စိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်ရသော အကြောင်းအရင်း ကိုရှာပါ
မိမိ လှောင်ပိတ်မိ နေသော စိတ်ဖိစီးမှု ၏ အကြောင်းအရင်း ခံကို ရှာပေးပါ။ တစ်စုံ တစ်ယောက်ကြောင့် ဒေါသ ထွက်ရပါသလား ၊ မိမိကိုယ် မိမိ ဒေါသ ထွက်ရသလား စသဖြင့် မိမိ ဘာကြောင့် ဤကဲ့သို့ ခံစား နေရသော အကြောင်းအရင်း ကို ဖော်ထုတ်ပါ။ Stress ဖြစ်ရသော အကြောင်းအရင်း ပေါ်ပေါက် လာပါလျှင် အဆိုပါ ကိစ္စမှာ အမှန်တကယ် Stress ဖြစ်သင့်သော ကိစ္စ ဟုတ် မဟုတ် ပြန်လည် ဝေဖန် ဆန်းစစ်ပါ။ Stress ဖြစ်လောက်ဖွယ် ကိစ္စ ဟုတ်လျှင် လောလောဆယ် မဆုံးဖြတ် ပါနှင့် ဦးနှောက် အေးသွားမှ သေချာ ပြန်စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ပါ။ Stress ဖြစ်လောက်ဖွယ် ကိစ္စမဟုတ် လျှင် သီချင်း နားထောင်ခြင်း ၊ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက် များနှင် စကားပြောခြင်း စသဖြင့် စိတ်ထွက်ပေါက် တစ်ခုခု ပေးပြီး ဖြေလျှော့ ပစ်လိုက်ပါ။ ဥပေက္ခာ ပြုပါ။
(၂) Stress ဖြစ်နေသောအချိန် ဘာလုပ်မလဲ
ခေါင်းများပင် ကိုက်အောင် Stress ဖြစ်နေပြီ ဆိုလျှင် ပထမဆုံး လုပ်သင့်သည်မှာ လူများနှင့် ဝေးရာ ၊ ဆူညံသံများ နှင့်ဝေးရာသို့ သွား၍ အေးချမ်းစွာ နေပစ်လိုက်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် ဖြေလျှော့ နိုင်သော ထိုင်ခုံ သို့မဟုတ် ခုတင် တစ်လုံးတွင် လှဲ၍ တစ်ကိုယ်လုံး ရှိ အကြောများကို နဖူးကြော မှ ခြေမကြော အထိ တင်းထားသမျှ အကုန်လျှော့ ပစ်လိုက်ပါ။ ထိုသို့ အကြော လျှော့ရာတွင် မျက်ခုံး ၊ မျက်လုံး ၊ နှုတ်ခမ်း ၊ မေး စသဖြင့် အသေးစိတ် တစ်ခုချင်း လိုက်လျှော့ ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံး အကြောတွေ လျှော့ပြီး အေးချမ်း သွားပြီ ဆိုမှ စိတ်ကို ပြင်ဆင်ပါ။ အတိတ်ကို ဥပေက္ခာ ပြု၍ လက်ရှိ အချိန်ကို အခြေတည် စဉ်းစားတတ်သော အကျင့်ကို ပျိုးထောင် သင့်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် သာမက စိတ်ကိုပါ ဖြေလျှော့ စေပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ အလုပ် ဆက်လုပ် နိုင်ပါပြီ။
(၃) ကျန်းမာရေး မထိခိုက်အောင် Stress ကို ဘယ်လို ကွပ်ကဲမလဲ
Stress ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ပြဿနာကို လက်ငင်းရှင်းဖို့ မကြိုးစားဘဲ စားစရာ ရှိက စား ၊ အိပ်စရာ ရှိက အိပ်စက်ခြင်း ဖြင့် စိတ်ထွက်ပေါက် ပေး ပေးပါ။ အိပ်ရေး မ၀လျှင် Stress ဖြစ်စေသော ဟော်မုန်း ပိုမို ထွက်ရှိ တာကြောင့် အိပ်ရေး ၀အောင် အိပ်စက် ထားသူဟာ Stress ဒဏ်ကို ပိုမို ခံနိုင်ရည် ရှိတာ တွေ့ရကြောင်း နိုင်ငံတကာ ကျန်းမာရေး ပညာရှင် များက ထုတ်ပြန် ထားပါတယ်။
(၄) ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားလုပ်ပါ
နာရီဝတ်ခန့် လမ်းလျှောက် ပေးခြင်း ၊ ယောဂထိုင်ခြင်း များကလည်း Stress ကို သက်သာ စေကြောင်းပါ။ ဒါကြောင့် Stress ဖြစ်ချိန်မှာ ခေတ္တ လမ်းလျှောက် ထွက်ခြင်း မျိုးလည်း သင့်လျော် ပါတယ်။
(၅) ဆန့်ကျင်ဘက် တွေးပါ
တစ်ခုခုကို စိတ်ပူပန် နေပါသလား။ ဥပေက္ခာ ပြုနိုင်သော စိတ်နှလုံးမျိုး မွေးရမှာပါ။ တစ်စုံ တစ်ယောက်ကို ဒေါသ ဖြစ်နေပါ သလား။ ကိုယ်ချင်းစာ တတ်သော စိတ်နှလုံး မျိုး မွေးရမှာပါ။ ပူလောင်ရတဲ့ ခံစားချက် များကို တရား သဘောဖြင့် ရှင်းထုတ် နိုင်အောင် ကြိုးစား သင့်ပါတယ်။
Posted by Welcome at 12:44 PM
Labels: ကျန်းမာရေးအသိ, ငံပြာရည်ကျိုခြင်း, မျှဝေခြင်း, အလှစာ၊, အထွေထွေ
မောင်လေးရေ ကြိုးကြားလေး ပြန်ပြီး ဘလော့ နား ရောက်လာတာ ၀မ်းသာတယ်.. နေကောင်း အဆင်ပြေရဲ့လား .. ကိုယ်ပိုင် အက်ဆေးလေးတွေ ရေးပါအုံး.. စောင့်ဖတ်ပါ့မယ်..
ကော်ဖီတွင် ပါဝင်သော ကဖိန်း
ပိုကျန်းမာစေမည့် နေ့စဉ်ဘ၀ နေမှုပုံစံလေးများ